News - Graphite electrode CN warar kooban
Warka kooban ee Graphite electrode CN
Qeybtii hore ee 2019, suuqa korantada garaafka gudaha wuxuu muujiyey isbeddel ku yimid qiimaha sii kordhaya iyo hoos u dhaca. Laga soo bilaabo Jannaayo illaa Juun, soo saaridda 18-ka ugu muhiimsan ee soosaarayaasha korantada garaafyada ee Shiinaha waxay ahayd 322,200 tan, ilaa 30.2% sannad-sannadeedka; Dhoofinta koronto garaafka Shiinaha waxay ahayd 171,700 tan, taasoo ka sareysa 22.2% bishii ka horreysay.
Xaaladda hoos u dhac aad u weyn oo ku yimid qiimaha gudaha, qof walba wuxuu bartilmaameedkiisa u yahay suuqa wax dhoofinta. Laga soo bilaabo celceliska qiimaha koronto-dhoofinta garaafka gudaha loo dhoofiyo laga bilaabo Janaayo ilaa Juun, waxaa la arki karaa in kastoo isbeddelka guud ee hoos u dhaca, haddana dooxada ugu hooseysa ay u muuqatay bishii Abriil, $ 6.24. / kg, laakiin weli ka sarreeya qiimaha celceliska gudaha inta lagu jiro isla muddadaas.
Marka la eego tirada, celceliska celceliska celceliska mugga elektaroodyada gudaha ee la dhoofiyo laga bilaabo Janaayo ilaa Juun 2019 way ka sarreeyaan tii saddexdii sano ee la soo dhaafay. Gaar ahaan sannadkan, kororka mugga dhoofinta ayaa aad u muuqda. Waa la arki karaa in shixnadaha elektaroolka garaafyada Shiinaha ee suuqyada dibedda ay kordheen labadii sano ee la soo dhaafay.
Marka laga eego aragtida dalalka dhoofinta, Malaysia, Turkiga iyo Ruushka ayaa ahaa saddexda ugu badan ee wax dhoofiya dalalka intii u dhaxeysay Janaayo ilaa Juun 2019, waxaana ku xigay Hindiya, Cumaan, Kuuriyada Koofureed iyo Talyaaniga.
Qeybta labaad ee sanadka, iyadoo ay sii kordheyso korantada koronto-wadayaasha waaweyn ee guryaha, heerka sicirka hadda wali waa la tijaabin doonaa, tartamada caalamiga ee badeecaduna way sii kordhayaan si waafaqsan. Waxaa lagu qiyaasaa in dhoofinta koronto-shiinaha Shiinaha ay kordhin doonto qiyaastii 25% sanadka 2019.
Waqtiga boostada: Aug-10-2020